Android Smartphone Archives - Technology Khabar
के तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि स्मार्टफोनमा राखिने एउटा वालपेपरले सेट गर्नाले तपाइँको फोन क्र्यास हुन सक्छ? तपाईँलाई पक्कै विश्वास लाग्दैन् तर अहिले यस बारेमा निकैे चर्चा भईरहेको छ । हालै […]
काठमाडौं । साइबर सेक्योरिटी फर्म ह्विच? (Which ?) ले विश्वभरीका एक अर्बभन्दा धेरै एन्ड्रोएड स्मार्टफोनहरुमा कमजोरी रहेको दाबी गरेको छ । फर्मको अनुसार यि स्मार्टफोनहरुमा सेक्योरिटी अपडेट्स नदिइने हुनाले यि […]
गूगल प्ले स्टोरमा १७ वटा नयाँ मालवेयर एप्स पत्ता लाग्यो, एन्ड्रोयड स्मार्टफोनको ब्याट्रीलाई हानि गर्ने
काठमाडौं । एन्ड्रोयड स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई एक पटक फेरि चेतावनी आएको छ । वास्तवमा, रोमानियाको एन्टी भाइरस सफ्टवेयर एन्ड सेक्योरिटी कम्पनी बिटडिफेन्डरको एक रिसर्चर्स ले गूगल प्ले स्टोरमा १७ […]
काठमाडौं । एन्ड्रोयड स्मार्टफोन स्पाई गर्ने नयाँ मालवेयर पत्ता लागेको छ । साइबर सेक्यूरिटी फर्म कास्पर्स्कीकाअनुसार नयाँ मालवेयर भाइसलीकर(ViceLeaker) ले एन्ड्रोयड स्मार्टफोनलाई आफ्नो टार्गेट बनाईरहेको छ । यो मालवेयरमार्फत ह्याकरहरुले […]
काठमाडौं । अमेरिकी प्रतिबन्धपछि गूगलले चिनियाँ टेलिकम कम्पनी ह्वावेसँगको आफ्नो सहकार्य निलम्बन गर्ने घोषणा गरेसँगै ह्वावेका एन्ड्रोयडमा आधारित स्मार्टफोनहरुको बारेमा निकै चर्चा भएको छ । ह्वावेले गूगलले एन्ड्रोयडसम्मको पहुँच रोक्ने […]
काठमाडौं । पछिल्लो सातादेखि एन्ड्रोयड फोन प्रयोगकर्ताहरुले गूगलको एप प्रयोगमा रोक लगाएको समस्या भोगिहरेका छन् । विभिन्न प्रयोगकर्ताहरुले गूगलको एप्स प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसमा अंग्रेजी भाषामा ‘डिभाइस इज नट सर्टिफाइड […]
काठमाडौं, १६ फागुन । हुवावेको पछिल्लो फ्ल्यागशिप फोन मेट एट (Mate 8) नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । हुवावेले आईतवार एक कार्यक्रमका बिच फ्ल्यागशिप फोन मेट एट तथा जीआर ५ […]
काठमाडौं, १३ साउन । के तपाईँ एन्ड्रोयडमा आधारित स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यदि छ भने तपाईँको स्मार्टफोन जोखिममा रहेको छ । त्यसैले ह्याकरहरुको एमएमएसबाट बच्नुहोस् । अहिले विश्वभरका एन्ड्रोयडमा […]